BO-JACK कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरु - कुकुरहरु
Bo-Jack कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरु
बोस्टन टेरियर / ज्याक रसल मिश्रित जात कुकुरहरू
'मेरो कुकुर बोस्टन टेरियर र ज्याक रसल टेरियरको बीचमा क्रस हो। उहाँ धेरै मायालु र राम्रो स्वभावको छ टन ऊर्जा । ऊ पनि एकदम चलाख छ। ऊ लगभग २० पाउन्ड बढेको हो। उसलाई धेरै व्यायाम चाहिन्छ। ऊ एक ठूलो अपार्टमेन्ट कुकुर हो। उस्कोसँग सेतो कलर र अनुहारको सुन्दर ब्रिन्डल कोट छ, उसको बोस्टन टेरियरका आफन्तहरूसँग। ऊ अत्यधिक उफ्रन सक्छ। चपलता प्रशिक्षण मन पर्छ। उहाँ एक राम्रो स्लिम कुकुर हुनुहुन्छ, कुनै वजन समस्या छैन। उहाँसँग धेरै चम्किलो शर्टहेयर कोट छ र धेरै थोरै शेड हुन्छ। ऊ कुनै दुर्गन्धित कुकुर होइन। आउने मानिसहरू भन्छन् कि ऊ सामान्य कुकुर जस्तो गन्ध पनि पाउँदैन। ऊ एकदम राम्रो देखिने र मांसल छ। '
बो-ज्याक शुद्ध कुकुर होईन। यो बीचको क्रस हो बोस्टन टेरियर र ज्याक रसल टेरियर । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरीरहेका छैनन् 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
'मैले बोस्टन टेरियर (पुरुष) र ज्याक रसल (महिला) लाई पैदा गरें। हामीसँग १ हप्ताको बच्चालाई यहाँ देखाइएको छ। हामी उनलाई बो-जैक भन्छौं। तिनीहरू वास्तवमै राम्रा पिल्लाहरू हुन्। म तिनीहरूलाई ज्याक रसल (महिला) र बोस्टन टेरियर (पुरुष) को अनुपम मिश्रण भन्छु। बोस्टन नर बोस्टनको ठूलो आकार हो। यी सबै पपीहरू कालो र सेता छन्। सेतो निशानहरू बोस्टनको जस्तो छन्। ब्रिन्डल यस चित्रमा राम्रोसँग देखा पर्दैन। मलाई लाग्छ उनीहरू उमेर बढ्दै जाँदा तस्वीरले अझ राम्रो देखाउँदछ। ' फोटो शिष्टाचार डी एण्ड डी केनेल, डेबी स्नाइडर र डग स्मूट, मालिकहरू
लघु pinscher dachshund मिक्स बिक्री को लागी
बोस्टन टेरियर / ज्याक रसल टेरियर हाइब्रिड पिल्पीहरू (बो-जैक्स) यहाँ १ हप्ता पुरानो देखाइएको छ।
बोस्टन टेरियर / ज्याक रसल टेरियर हाइब्रिड पिल्ला (बो-जैक), फोटो एण्ड डी को केनेल, डेबी स्नाइडर र डग स्मूटको मालिकाना, मालिकहरू
२/२ हप्ताको उमेरमा बो-जैक पिल्ला — यसको आमा जैक रसल र बुबा बोस्टन टेरियर हुनुहुन्छ। फोटो शिष्टाचार डी एण्ड डीको केनेलको
'यी चित्रहरू हुन् जुन मैले हाम्रो ज्याक रसल / बोस्टन टेरियर मिक्स पिल्ला, जाजामिन3महिना पुरानोमा लिएँ। उनी दुबै जातका उत्तम मिश्रण हुन्। उनीलाई मन पर्छ चलाउनुहोस्, चलाउनुहोस्, चलाउनुहोस् र हाम्रा बच्चाहरूसँग खेल्छन् र जब यो सकिएकी हुन्छ, उनी कसैको साथ कुटिल हुन मन पराउँछिन् जसको लागि घुँडा टेर्ने गरी छिन्। उनी आफ्ना मानिसहरूसँग बस्न रुचाउँछिन्। उनी कहिल्यै टाढा हुँदैनन्। उनी धेरै मनमोहक छिन्। '
एउटा भाँडो घेरिएको सुँगुरले कति ठूलो पार्दछ
Jazmin Bo-Jack हाइब्रिड पिल्ला उनीसँग months महिना पुरानो प्रशान्त खेलौना ।
'यो मेरो ज्याक रसल र बोस्टन टेरियर मिक्स हो बेलले मेरो भतिजाको स्विing सेटमा खेल्ने क्रममा हुँदा। त्यस समयमा उनी एक स्लाइडको शीर्षमा थिइन। उनी धेरै सक्रिय छन् तर उनी सुत्न पनि समय लिन्छिन् र केहि हेर्न मन पराउँछिन् टिभी शोहरू। बेले ट्रेन गर्न सजिलो कुकुर थिएनन् र वास्तवमा उनी अझै पनि उनलाई लिन कोशिस गर्दैछिन् भौंकने, खन्ने र केहि अन्य उत्साहजनक गुणहरू उनको नियन्त्रणमा छ। हामी सँगै यो गरिरहेका छौं, तर उनको आफ्नै दिमाग छ। उनी यस चित्रमा १ १/२ वर्ष पुरानो छिन्, धेरै नक्कली खेलौना र खेल खेल्ने मन पराउँछिन्, मेरो झोलामा हाम फाल्दा म हुँदा कम्प्युटर र म शपथ लिन सक्छु यदि ऊ थम्ब्स छ भने उसले कम्प्युटरमा काम गर्ने छ। बेले बुद्धिमान छ तर हुन सक्छ कडा टाउको ... तर उनि माया गर्न मन पर्छ र प्रेम दिनुहोस् र म यसको लागि तयार छु! '
फ्रेन्च बुलडग बक्सर मिक्स पिल्पीहरू
'यो मेरो कुकुर मोली मू हो years बर्षको उमेरमा। उनकी आमा बोस्टन टेरियर र उनका बुबा ज्याक रसल टेरियर हुनुहुन्थ्यो। जब उनी फार्ममा बस्ने साथीबाट एक वर्षकी थिइन्, हामीले उनलाई पायौं। हाम्रो साथीको ज्याक रसलले छिमेकीको बोस्टन टेरियरलाई 'क्रेटेड' गरेको थियो र जब फोहोर बाहिर आयो, मेरो साथीलाई यति दोषी महसुस भयो कि उसले एक पल्पीलाई लग्यो। यो (हाम्रो फाइदाको लागि) रूपान्तरित भएपछि, तिनीहरूले उनलाई उनको फार्ममा राख्न असमर्थ बनाए किनभने उनी कुखुराको कोप फेनिस अन्तर्गत उत्खनन गर्दै र कुखुरा मार्ने । मेरो श्रीमान्को कुकुर भर्खर मरेको थियो त्यसैले साथीले हामीलाई सोध्यो कि हामीलाई अर्को कुकुर चाहियो कि? '
'यसरी मेरो श्रीमान्‌, म र मोलीबीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। उनी यस्तो रमाईलो कुकुर हुन् र अत्यन्त मायालु र समर्पित छिन्। उनको मनपर्ने खेलौना एक गाँठिएको डोरी हो जुन मैले यसको विनाशको कारणले मासिक प्रतिस्थापन गर्दछु। मैले १ r० पाउन्डको कुकुर (मोली करिब २ 28 पाउन्ड) को लागि किन्नुपर्दछ किनकि यदि त्यो भन्दा पनि सानो छ भने, उसले २ दिन भित्र यसलाई काट्ने छ। मोलीले वर्षालाई घृणा गर्छ र हिउँ सहन गाह्रो हुन्छ। उनी बिरालो जस्तै छिन् जब कि उनले घरमा सनबैम खोज्छिन् र घण्टासम्म यसमा सुत्नन्। उसको मनपर्ने मनोरञ्जन कुर्सीको पाखुरामा बस्नु र पछाडिको ढोका वा अघिल्लो विन्डोमा हेर्नुहोस्। उनी निकै चासोका साथ हेर्छिन् जब पनि कार, व्यक्ति वा जनावर उनको दृश्य क्षेत्रमा आउँदछन्। उनी स्ट्याकआउट्समा पुलिस कुकुर झैं महान भइन्। हामीले मोली नपाउन्जेल हाम्रो घरपछाडि एउटा डरलाग्दो तिल समस्या थियो। उनी मोलहरू समात्न यति प्रभावकारी छिन् कि मेरा साथीहरूले उनलाई दिनको लागि भाडामा लिन चाहन् ताकि उनी उनीहरूको यार्डहरू पनि खाली गर्न सक्छिन्। '
'मौली एकदम बेलपत्र हो जब हामी बेलुका टिभी हेर्दैछौं र उनको मनपर्ने निद्रा स्थिति हामी दुईको बीचमा तन्काइएको छ मानौं ऊ त तातो कुकुर हो र हामी बन हौं। उनीसँग वास्तवमै एक प्रकारको पूरर छ कि उसले उनलाई बनाउँदा तपाईंले बनाउनु हुन्छ र उहाँ वास्तवमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। '
'उनीले एउटा अण्ड्रो डाइभट गरीरहेकी छिन् जसले गर्दा उनको दुई तल्लो फेangहरू प्रायः देखिने छन्। उनीलाई मन पर्छ हिंड्नुहोस् र कार सवारी को लागी जानुहोस्। म उनीसँग हप्तामा धेरै पटक हिड्ने प्रयास गर्छु। उनको प्रजननको बाबजुद, उनी वास्तवमै एकदम शान्त कुकुर हो जसले साघुँरो हुँदैन। तर जब उनी काममा व्यस्त हुन्छन्, होशियार रहनुहोस् किनकि उसले खेललाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। सामान्यतया यस समयमा उनी आफ्नो डोरी खेलौना लिन दौडिन् ताकि उनी लिन सक्छिन् यसमा उनको आक्रामकता बाहिर । मोली एकदम साधारण कुकुर हो र मेरो परिवारमा उनी नहुनु म कल्पना गर्न सक्दिन। '
मौली Moo बो-जैक4वर्ष पुरानो मा
बोस्टन टेरियर मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
ज्याक रसल टेरियर मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
कसरी एक बैल मास्टिफ तौल गर्दछ
कालो र सेतो तिब्बती टेरियर
dachshund मिक्सर spaniel संग मिक्स
शिबा inu चिहुआहुआ संग मिश्रित
मलाई योर्की पूका चित्रहरू देखाउनुहोस्